Sheeko Sheeko, Sheeko Xariir idheh. - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
Home → news → sheeko caruureed → SHEEKO GAABAN
→ Sheeko Sheeko, Sheeko Xariir idheh.
iftineducation.com - Sheeko Sheeko, Sheeko Xariir idheh.
Ma ogtahay Akhristoow in ay Kumanaano Kun gaarayaan Wasiirada, Wasiiru dowlayaasha iyo Kuxigeenada Dowladihii soomaray dalka kadib burburkii 1991-dii Misena uusan kujirin hal qof lab ama dhedig kuu doone ha noqdee oo waxtar u lahaa dalka iyo dadka, marka laga reebo taariikh nololeedkiisa in ay u gashay inuu wasiir soo noqday keliya maahee.
Ma ogsoontahay in Mas'uul kasta marka uu xil yar iyo mid weyn kuu qabtaba uu leeyahay labo fursad inuu noqdo qof u dhawaada quluubta shacabka iyo dalka iyo inuu noqdo mid ku guuleeysta shaqsiyaad yar yar oo uu afka maalmaha hore wax u mariyo waxoogaa subag ah.
Ma ogtahay akhristoow inta lagu jiro 4.5 oo lagu saleeyo meelaha qaar ee xilalka dowliga ah ee qabyaaladda lagu saleeyo in ay dadkii waxtarka ulahaa dowladnimada oo dalkan u qidmeeyn lahaa iyagoon qof iyo qabyaalad aqoon, uu markasta ka horeeyo kuwa qabyaaladda ku awr kacsada.
Ma ogtahay Akhristoow in sheekadii qabiilka haatan loo bedelay Xisbi balse aysan meesha ka marnayn Qabyaaladdii.
Ma ogtahay Akhristoow, haddii aad tahay Soomaali Wadani ah in waqtigu siduu ahaa shalay uu iska bedelay, sida uu maanta yahayna uu iska bedeli doono Dowladnimada ay haatan ka wanaagsan tahay sidii ay afar sano kahor ahaan jirtay, keliya waxaa aan u baahanahay ay tahay Shilin Soomaali barako leh oo doolar EVC iyo Xisaabaadka bank-yada gaarka ah naloogu bedelay oo midkoodna uusan jeclayn sheekada Shilinkii Soomaaliga ee qiimihiisu habqanka galay.
Ma ogtahay Akhristoow in maanta wixii naga maqan aan ku socono inaan gaarno sida Dowlad cago adag ku taagan iyo 4.5 oo lagu wado in lasoo afjaro sanadkan 2016-ka, 20120-kana qof iyo cod lagu gaaro dowladnimo dhab ah iyo isla xisaabtan.
Ma ogtahay Akhristoow in dowlad xun ay dowlad la'aan dhaanto.
Ma ogtahay Akhristoow in sida ay maanta sheekadu u tahay Haweenka oo lasiinayo 30% Kuraasta Baarlamaanka ay u muuqato sida bulshada Soomaaliyeed ay ugu bisil yihiin dulqaadka dowladnimo iyo in la gaaro Nabad iyo hanaan doorasho Dimoqraadi ah, Allahayoow nooga dhig sanadka 2017-ka kii lagu ilaabo waxkasta oo xumaha Soomaaliya ah iyo Nabad diidka wejiga fiican Soomaaliya u diidan balse ay ka adkaatay marhore sida muuqata.
waad mahadsan tihiin inta samaha Soomaaliya Jecel, Soomaaliya diidoow Silac u dhimo, Hanoolaato Soomaaliya weligayd Hajirto Hana joogto iyadoo xumo oo dhan xor ka ah, Aamiin.